चेन्नईले इतिहासकै खराब प्रर्दशन गर्नुका पाँच कारण चेन्नईले इतिहासकै खराब प्रर्दशन गर्नुका पाँच कारण
चेन्नईले इतिहासकै खराब प्रर्दशन गर्नुका पाँच कारण
प्रकाशकराष्ट्रिय टाइम्स संवाददाता — 10/24/2020 11:51:00 am 0
एजेन्सी– चेन्नई सुपर किंग्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२० मा इतिहासकै खराब प्रर्दशन गरेको छ । तीन पटकको च्याम्पियन चेन्नईले यस अघिका सिजनमा फाइनलमा लगातार सहजै स्थान बनाउँदै आएको थियो ।
यसपटक भने चेन्नई पहिलो पटक प्ले अफ नपुगि बाहिरिने पथमा छ । चेन्नई लिग चरणबाट बाहिरिन औपचारिकता बाँकी देखिन्छ । चेन्नई लिग चरणबाट पहिलो पटक बाहिरिने संघारमा पुगेको हो । चेन्नई ११ खेलमा ८ मा हार र ३ मा जित सहित पुछारमा छ । चेन्नईले सन् २०१०, २०११ र २०१८ मा आइपिएलको उपाधि जितेको थियो ।
आइपिएलको सर्वाधिक सफल फ्रेन्चाइज टोली चेन्नईले सन् २००९ र २०१४ बाहेक अन्य सबै संस्करणमा फाइनल खेलेको थियो । तर यस सिजनमा चेन्नई प्रतियोगिताकै कमजोर टोली देखिएको छ । चेन्नईले आइपिएल इतिहासकै खराब प्रर्दशन गर्नुको प्रमुख पाँच कारण यस प्रकार छन् ।
५. स्पिनरको कमजोर प्रर्दशन
चेन्नईले खराब प्रर्दशन गर्नुको एक कारण स्पिनरहरुको कमजोर प्रर्दशन हो । चेन्नईको मुख्य हतियार स्पिन आक्रामण रहँदै आएको थियो । चेन्नईका स्पिनरहरुले घरेलु मैदान एम चिदम्बरम स्टेडियममा उच्च प्रर्दशन गर्दै टोलीको जित सहज बनाउँदै आएका थिए ।
यसपटक यूएईमा चेन्नईका स्पिनर चल्न सकेनन् । यस सिजनमा चेन्नईले चार स्पिनर प्रयोग गर्दा कुल १४ विकेट लिएका छन् । रविन्द्र जडेजाले ११ खेलमा ४ विकेट, पियुष चवलाले ७ खेलमा ६ र करण शर्माले ४ खेलमा ४ विकेट लिएका छन् । एक खेल खेलेका इमरान ताहिर विकेट बिहिन छन् । सम्भव त इतिहासमा चेन्नईबाट स्पिनरको खराब प्रर्दशन हुन सक्छ ।
गतवर्ष चेन्नईका पाँच स्पिनरले कुल ६२ विकेट लिएका थिए । ताहिरले २६, हरभजन सिंह १६ र जडेजाले १५ विकेट लिएका थिए । सन् २०१८ मा पनि चेन्नईले उपाधि जित्दा स्पिनरहरुले २८ विकेट लिएका थिए । हरेक सिजनमा चेन्नईको स्पिन आक्रामण हतियारको रुपमा रहँदै आएको थियो । तर यस पटक स्पिनरहरुको प्रर्दशन खराब रह्यो ।
अर्कोतर्फ चेन्नईका तीव्र गतिका बलरको प्रर्दशन पनि निकै खराब रह्यो । दीपक चहर र साम करन बाहेक अन्यको प्रर्दशन सम्झन लायक छैन । चेन्नईका ६ बलरले जम्मा ४० विकेट लिएका छन् । जसमा करन र चहरको नाममा १०–१० विकेट छ ।
४. अक्सनमा आवश्यक खेलाडी नकिन्नु
कुनैपनि टोलीले अक्सनमा कस्तो खेलाडी अनुबन्ध गर्छ त्यसले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । चेन्नई सन् २०२० मा कमजोर टोली मध्य एक मानिन्थ्यो । टोली मजबुत बनाउन अक्सनमा विशेष ध्यानदिनु पर्ने थियो । तर अक्सनमा चेन्नईले आवश्यकता अनुसार खेलाडी अनुबन्ध गर्न सकेको थिएन ।
चेन्नईले अक्सनमा साम करन, पियुष चवला, जोश हेजलवुड र रवि शाई किशोर लगायतका खेलाडी अनुबन्ध गरेको थियो । अक्सनमा भारतीय देवदत्त पाडिक्कल, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, राहुल त्रिपाठी लगायतका खेलाडी थिए । विदेशी खेलाडीमा ओईन मोर्गन, टम ब्यान्टन, शिम्रन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस लगायतका चर्चित खेलाडी थिए । जसमा चेन्नईले ब्याटिङ बलियो बनाउन कम्तिमा दुई विश्वस्तरिय खेलाडीलाई मोटो रकम खर्चिएको भए नतिजा सायद फरक आउन सक्थ्यो ।
चेन्नईले अक्सनमा ठूलो रकम खर्चिन चाहेँन । त्यसैको नतिजा अहिलेको अवस्थामा पुगेको छ । बेंगलोरले आफ्नो समस्या समधान गर्न क्रिस मोरिसलाई, दिल्लीले शिम्रन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिसलाई र पन्जाबले ग्लेन म्याक्सवेललाई महँगो मूल्य खर्चेको थियो । तर चेन्नईले त्यसो गरेन इतिहासकै कमजोर नतिजा बेहोर्नु पर्यो ।
३. नियमित खेल खेलेका खेलाडीको कमी
चेन्नईले इतिहासकै खराब प्रर्दशन गर्नुको अर्को कारण बुढा खेलाडीको बाहुल्यता हुनु पनि हो । चेन्नईको प्लेइङ ११ मा रहेका अधिकाम्स खेलाडी लामो समय देखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेका थिएनन् । चेन्नईको पहिलो रोजाईमा खेलेका शेन वाटसन, पियुष चवला, धोनी, अम्बाती रायुडु, केदार जाधव, ड्वेन ब्राभो लगायतका खेलाडी लामो समय देखि मैदान बाहिर थिए ।
चेन्नईमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका खेलाडीमा साम करन र रविन्द्र जडेजा थिए । यी दुबै खेलाडीले प्रर्दशन पनि राम्रो रह्यो । दीपक चहर र जोश हेजलवुड पछिल्लो समय चोटको सामना गर्दै आएका थिए । टोलीमा युवा खेलाडीको बाहुल्यता नहुँदा फिल्डिङ पनि त्यतिनै कमजोर थियो ।
वर्तमान समयमा प्रर्दशनसँगै फिटनेश पनि त्यतिनै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
वर्तमान समयमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका खेलाडी टोलीमा नहुँदा चेन्नईले खराब प्रर्दशन गरेको हो । उत्कृष्ट प्रर्दशन गरि रहेको मुम्बईमा रोहित शर्मा, काइरन पोलार्ड, क्विन्टन डी कक, जस्प्रित बुमराह, ट्रेन्ट बोल्ट लगायतका खेलाडी छन् । दिल्लीमा शिखर धवन, पृथ्वी शा, श्रेयस ऐर, ऋषभ पन्त, कागिसो रबाडा, मार्कस स्टोइनिस र शिम्रन हेटमायरले लगातार अन्तर्राष्ट्रिय खेल लगातार खेल्दै आएका छन् । जसको कारण प्रर्दशन पनि उच्च छ । तर चेन्नईमा त्यसको अभाव हुँदा प्रर्दशन पनि त्यसै अनुसार रह्यो ।
२. रैनाको अनुपस्थिति
यस सिजनमा चेन्नईको ब्याटिङ लाइनअप निकै कमजोर हुनुमा प्रमुख ब्याट्सम्यान सुरेश रैनाले अन्तिम समयमा पारिवारिक नाम फिर्ता लिनुपनि एक कारण हो । रैना आइपिएलका सर्वाधिक दोस्रो सफल खेलाडी हुन् ।
रैनाले आइपिएलमा सिजनमा ४ सय भन्दा कम रन तीन पटक मात्र बनाएका छन् । सन् २०१५, २०१६ र २०१९ मा रैनाले क्रमशः ३७४, ३९९ र ३८४ रन बनाएका थिए । अन्य सबै सिजनमा ४ सय भन्दा माथि रन बनाएका छन् । सन् २०१० मा उपाधि जित्दा कुल ५ सय २० रन बनाएका थिए । २०११ मा दोस्रो उपाधि जित्दा ४ सय ३८ रनको योगदान थिए ।
चेन्नईबाट सुरुवात देखिनै खेल्दै आएका रैनाले राम्रो प्रर्दशन समेत गर्दै आएका थिए । उनको राम्रो प्रर्दशनले अन्य खेलाडीलाई खेल्न सहज समेत हुन्थ्यो । रैना नहुँदा चेन्नईको शीर्षक्रम ब्याटिङ अस्थिरमात्र रहेन लगातार खराब पनि रह्यो । चेन्नईमा यस सिजनमा सर्वाधिक रन फाप डु प्लेसिसले बनाए । डु प्लेसिसले ३ सय ७६ रन बनाएका छन् । अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले ३ सय रन बनाउन सकेका छैन् ।
एकै खेलाडीको प्रर्दशनले क्रिकेटमा जित सम्भव हुँदैन । तर टोलीको प्रर्दशन र नतिजामा भने धेरै फरक पार्छ । रैना चेन्नईमा हुन्थें भने सायद नतिजा फरक हुन सक्थ्यों । अन्तिम समयमा रैनाले उक्त निर्णय लिएको हुँदा चेन्नई थप समस्यामा पर्न पुग्यो ।
१. धोनीको कमजोर प्रर्दशन
धोनी चेन्नईका प्रमुख खेलाडी हुन् । चेन्नईको जित र हारमा ब्याटिङ मात्र होईन कप्तानी र विकेटकिपर लगायत सम्पूर्ण कुरमा धोनीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस सिजनमा धोनीको प्रर्दशन खराब छ । धोनीले ११ खेलमा १ सय ८० रन बनाएका छन् ।
धोनीको उत्कृष्ट फिनिसिङ सधैं टोलीका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । धोनीले उच्च प्रर्दशन गर्दा अन्य खेलाडीको मनोबल र प्रर्दशनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्दछ । तर यस पटक धोनी आफैं संघर्ष गर्दा टोलीलाई पनि त्यसबाट अछुतो राख्न सकेनन् । तल्लोक्रममा धोनीको ब्याटबाट रन निस्किन सकेको छैन ।
गतवर्ष धोनीले उत्कृष्ट प्रर्दशनका साथ ४ सय १६ रन बनाएका थिए । सन् २०१८ मा उपाधि जित्दा ४ सय ५५ रन जोडेका थिए । त्यस अघिका हरेक सिजनमा चेन्नईबाट धोनीले उच्च प्रर्दशन गरेका थिए । चेन्नईबाट धोनीले एक सिजनमा मात्र ३ सय भन्दा कम रन जोडेका छन् । जुन २०१० मा भएपनि चेन्नईले उपाधि जितेको थियो । धोनीको ढल्किँदो उमेरसँगै कमजोर प्रर्दशन हुँदा टोली पनि त्यहि बाटोमा रह्यो ।